काठमाडौं –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा सडकमा उत्रिने प्रदर्शनकारीमाथि कटाक्ष गर्नुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४०औं स्मृति दिवशका अवसरमा नेकपाले राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले किसिम-किसिमका मान्छे सडकमा उत्रिएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको हो ।
के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले ?
अचम्म लाग्छ, एउटा अनशनको मुद्दा बनायो । त्यो अनशन पनि गन्नुपर्छ, यो कतिऔं हो भनेर ।
के मुद्दा, के मामिला, के विषय ? सहभागिताले आफैं भन्छ ।
सडकमा तपाईंले हेर्नुभयो भने के रहेछ मुद्दा अनशनको भन्ने आफैं थाहा हुन्छ ।
किसिम-किसिमका मान्छेहरू छन् । कोही गेरु वस्त्रमा देखिन्छन् । कोही संन्यासी रूपमा देखिन्छन् । कोही ठाडो चन्दन लाको छ । कोही तेर्सो चन्दन लाको छ । माला लाको छ, कोही रुद्राक्ष, कोही तुलसी ।
मुसा खानेजस्तो कोही लाग्दैन । अचम्मका, अनौठा-अनौठा दृष्यहरू देखिन्छन् ।
बेलायती मन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्रीको वार्ता, जानकार भन्छन्– भूपू गोरखाको समस्या सुल्झाउन वार्ता टोली चाहिन्छ